Ny rano : zavatra tena sarobidy manoloana ny COVID-19 | UNICEF Madagasikara
Ny rano : zavatra tena sarobidy manoloana ny COVID-19
Ny ady amin'ny COVID-19 dia nanery ny ankohonana maro eto Madagasikara hiverina hijery ny fomba fidiovany – toe-javatra tsy mora anefa ho an’ny tokantrano anarivony, izay indrisy fa tsy mahazo rano moramora foana. Izany no nahatonga ny UNICEF nanolotra fanohanana ny Minisiteran'ny Rano, Fahadiovana sy Fidiovana mba hanamorana ny famatsian-drano ho an'ireo tokantrano marefo eto Antananarivo, Toamasina ary Moramanga.
Tena gaga i Ravaonoro Jeanne rehefa tsy nandany afa-tsy ny atsasaky ny vola izay efa nomaniny tamin'io maraina io. I Judicaël, mpitantana ny paompin-drano eny Ankasina, dia nilaza taminy fa 20 Ariary ny vidin’ny rano 20 litatra manomboka izao.
“Faly ny rehetra amin'ity fanambarana ity. Nanomboka tamin’ny herinandro dia nampidina ny vidin'ny rano izahay araka ny toromarika nomena anay," hoy i Judicaël, izay nilaza fa tena vaovao tokoa ity indray mitoraka ity. Nandritra izay taona maromaro naha-mpitantanana paompin-drano azy izay tokoa mantsy dia 50 Ariary hatrany no namarotana ny rano iray siny 20 litatra.
Ity fihenam-bidy ity dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny UNICEF sy ny Minisiteran'ny Kaominin'Antananarivo, ao anatin’ny hetsika "Avotr'Aina". Nisy ny didim-panjakana kaominaly nivoaka tamin’izany, entina mamaritra ny vidin'ny rano, vokatry ny fanampiana ho an'Antananarivo, Toamasina ary Moramanga mandritra ny 3 telo volana ho avy. Ho ampiarina eny amin’ny paompin-drano miisa 2.000 io vidin-drano vaovao io, ka olona marefo 600 000 no hisitraka izany.
Ao anatin’ny hetsika "Avotr'Aina", mpanentana avy ao amin’ny fikambanana ASOS no hiandraikitra ny fanentanana eny anivon’ireny paompin-drano ireny. Romina Nivo Irma dia iray amin'ireo mpanentana izay miasa ao amin'ny distrikan'i Ankasina.
Romina Nivo dia mpanentana efa an-taonany maro. Mitetitety fokontany maro izy mba hahafahany manao fanentanana sy manampy ny olona mba haharaka vaovao sy ho voaaro.
"Ny fanentanana izay ataonay dia miompana indrindra amin’ny maha-zava-dehibe ny rano amin'ity toe-javatra ity sy ny fepetra sakana tokony hajain’ny olona tsirairay matsaka rano", hoy ny fanazavan'i Romina Nivo, izay nanangana ny fitaovana fanasana tanana amin'ny savony.
Araka ny filazany, ny fisian’ny COVID-19 dia nandrisika mafy ny olona mba hanovo rano. Ho an'i Ankasina dia olona enimpolo eo ho eo no tonga maka rano. "Lasa manasa tanana matetika izahay tato ho ato satria araka ny voalaza dia anisan’ireo fihetsika mety hanavotr’aina izany mandritra ity COVID-19 ity," hoy ny fanazavan'i Ravaonoro Jeanne.